Ciidamada Booliska Galmudug oo shaqa joojin ku dhawaaqay. – Hornafrik Media Network
Dhuusamareeb Hornafrik Ciidamada Booliska ee Maamulka Galmudug ayaa 48saac u qabtay in maamulka Galmudug ay ugu jawaabaan cabasho ay qabaan ciidamadaasi, kuwaas oo kacabanaya in eysan helin xaquuqdii ay la haayeen.
Saraakiisha Ciidamada Booliska ayaa tilmaamay in dhowrkii sano ee la soo dhaafay ey nan arag xuquuqdii ay la haayeen, sida mushaarkoodii, Gunadii, daryeel, dalacsiin, iyo waxyaabaha kale ee ay mudnaayeen, isla markaana ay waayeen cid ka hadasha hadii ay ahaan lahaayeen Madaxda sare Dowladda federaalka, Madaxda maamulka Galmudug iyo Taliska Booliiska ee maamulkaas.
Ciidamadaan ayaa ku dhawaaqay shaqa joojin ilaa iyo inta looga soo jawaabaayo, waxay hadda la xaqiijiyay in ciidamada shaqada joojiyay in tiradooda ay gaareyso ku dhawaad 575 ciidan iyo saraakiishoodaba.
Xariiro ay warsidaha Hornafrik la sameysay saraakiisha ciidamada Booliska maamulka Galmudug ayaa waxay sheegeen in maqleen shaqa joojinta ciidamada Booliska Galmudug ay ku dhawaaqeen laakiin ay ka jawaabi doonaan saacadaha soo socda.
Wasaarada Tamarta iyo Biyaha oo ka hadashay biyo la`aan ka jirta qaar ka mid ah gobolada dalka.